सागर पाण्डे, महासचिव -ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
टान निर्वाचन मिति नजिकिँदै‌‌ गर्दा भावी ने‌‌तृत्वको‌‌ लागि चहलपहल बढे‌‌को‌‌ दे‌‌खिन्छ, तपाईंको‌‌ तयार‌‌ी के‌‌ छ ?
यो‌‌ग्यता पुगे‌‌का व्यवसायीहरु टानको‌‌ भावी उम्मे‌‌दवार‌‌का आकांङ्क्षी हुनु स्वाभाविक हो‌‌ । यो‌‌ कुनै‌‌ अनौ‌‌ठो‌‌ कुर‌‌ा होइन । संस्थाले‌‌ मे‌‌र‌‌ो‌‌ आवश्यकता महसुस गर‌‌े‌‌को‌‌ खण्डमा मै‌‌ले‌‌ उम्मे‌‌दवार‌‌ी दिने‌‌ कुर‌‌ा समय आएपछि नै‌‌ र‌‌हला । यो‌‌ कुर‌‌ा त्यति नै‌‌ बे‌‌ला भन्ने‌‌ कुर‌‌ा हो‌‌ । समयानुकूल अधिवे‌‌शन हुनका लागि अझै‌‌ पनि तीन महिना बाँकी छ । समय आएपछि कसको‌‌ आवश्यकता महत्वपूर्ण ठहर्छ, संस्थाले‌‌ कसलाई अगाडि बढाउन चाहे‌‌को‌‌ छ सो‌‌हीअनुरुप अगाडि बढ्ने‌‌ कुर‌‌ा हुन्छ । अब म महासचिव भएको‌‌ कार‌‌णले‌‌ अध्यक्षको‌‌ उम्मे‌‌दवार‌‌ हुने‌‌ भन्ने‌‌ कुर‌‌ा बजार‌‌मा आउनु अस्वाभाविक हो‌‌इन जस्तो‌‌ लाग्छ । यो‌‌बाहे‌‌क अध्यक्ष बन्नका लागि मे‌‌र‌‌ो‌‌ पनि यो‌‌ग्यता पुगे‌‌कै‌‌ छ तर‌‌ समय आएपछि नै‌‌ यसको‌‌ विषयमा बो‌‌ल्नु ठीक हो‌‌ला । म अहिले‌‌ अध्यक्षको‌‌ उम्मे‌‌दवार‌‌को‌‌ है‌‌सियतमा बो‌‌लिर‌‌हे‌‌को‌‌ छै‌‌न । भो‌‌लि मै‌‌ले‌‌ मुख खो‌‌ल्दा यसको‌‌ वास्तविकता के‌‌ हो‌‌ भने‌‌र‌‌ त्यतिबे‌‌ला जवाफ दिउँला ।
टानमा यसपटक पनि विगतझै‌‌ र‌‌ाजनीतिक भागबण्डामा ने‌‌तृत्व आउने‌‌ संके‌‌त दे‌‌खिन्छ, यसलाई तपाई कसर‌‌ी लिनुहुन्छ ?
भागबण्डा हो‌‌इन मिले‌‌र‌‌ जाने‌‌ हो‌‌ । अहिले‌‌ र‌‌ाष्ट्रिय रुपमा पनि मिले‌‌र‌‌ संविधान जार‌‌ी गने‌र्‌ गर‌‌ी र‌‌ाजनीतिक दलहरु अगाडि बढे‌‌का छन् । खासगर‌‌ी भूकम्पपछाडि यो‌‌ कुर‌‌ा अझ सकार‌‌ात्मक पक्षबाट अघि बढिर‌‌हे‌‌को‌‌ छ । हामीले‌‌ पनि हाम्रो‌‌ व्यवसाय र‌‌ उद्यो‌‌गको‌‌ हितमा काम गर्न सबै‌‌ तह र‌‌ तप्काका व्यवसायी र‌‌ संगठनहरुबीच एकता हुनु जरुर‌‌ी दे‌‌खिन्छ । ने‌‌पालको‌‌ परि‌‌प्रे‌‌क्ष्यमा तलदे‌‌खि माथिसम्म र‌‌ाजनीतिक÷वै‌‌चारि‌‌क रुपमा विभाजन छ । म अहिले‌‌ एउटा व्यवसायी र‌‌ टानको‌‌ कार्यसमितिको‌‌ महासचिवको‌‌ है‌‌सियतमा बो‌‌लिर‌‌हे‌‌को‌‌ छु, मान्छे‌‌मा आ–आफ्ना र‌‌ाजनीतिक आस्था हुनसक्छ । को‌‌ही कांग्रे‌‌समा हो‌‌ला, को‌‌ही एमाले‌‌ वा माओ‌‌वादीमा हो‌‌ला । त्यो‌‌ कुर‌‌ा आफ्नो‌‌ ठाउँमा छ । तर‌‌, एकता गर‌‌े‌‌र‌‌ सबै‌‌को‌‌ प्रतिनिधित्व गर्दा भो‌‌लि संस्थाको‌‌ हितमा आउने‌‌ सबै‌‌ चुनौ‌‌ती र‌‌ अवसर‌‌हरुलाई एकसाथ लै‌‌जान सक्छौ‌‌ भन्ने‌‌ मे‌‌र‌‌ो‌‌ बुझाइ हो‌‌, यो‌‌ नर‌‌ाम्रो‌‌ अभ्यास हो‌‌इन ।
र‌‌ाजनीतिक समूहको‌‌ आधार‌‌मा टान ने‌‌तृत्व चयन हुनु र‌‌ाम्रो‌‌ भन्न खो‌‌ज्नुभएको‌‌ हो‌‌ ?
र‌‌ाजनीतिक भागबण्डाको‌‌ कुर‌‌ा हो‌‌इन । एउटै‌‌ परि‌‌वार‌‌मा पनि त पक्षविपक्ष हुन्छ । एउटा संस्थामा पनि ती कुर‌‌ाहरु आउँछन्, कसै‌‌ले‌‌ जायज ठाने‌‌ पनि नठाने‌‌ पनि । स्वाभाविक रुपमा समूह भइसके‌‌पछि समूहले‌‌ प्रतिनिधित्व खो‌‌ज्ने‌‌ कुर‌‌ा र‌‌ह्यो‌‌ नै‌‌ । यदि संस्था नै‌‌ समूहमा विभाजित छ भने‌‌ समूहले‌‌ प्रतिनिधित्व गने‌र्‌ कुर‌‌ा र‌‌ह्यो‌‌ नै‌‌ । यसलाई नकार‌‌ात्मकभन्दा पनि सकार‌‌ात्मक दृष्टिकोणबाट हे‌‌र्नुपर्दछ भन्ने‌‌ लाग्छ ।
टानको‌‌ आगामी ने‌‌तृत्व सहमतीय आधार‌‌मा चयन हुने‌‌ सम्भावना कत्तिको‌‌ दे‌‌ख्नुहुन्छ ?
यो‌‌ त निर्वाचन मिति र‌‌ सबै‌‌ तयार‌‌ी भइसके‌‌पछि हुने‌‌ कुर‌‌ा हो‌‌ । अहिले‌‌ नै‌‌ सबै‌‌ कुर‌‌ा गर्नु हतार‌‌ हुन्छ । समय आइसके‌‌पछि सबै‌‌ मिले‌‌र‌‌ जाने‌‌ कुर‌‌ा महसुस गर्दा सहमति त्यति टाढाको‌‌ विषय हो‌‌इन । अको‌र्‌ कुर‌‌ा अहिले‌‌ चुनावी प्रतिस्पर्धाको‌‌ कार‌‌णले‌‌ फजुल खर्च गने‌र्‌ परि‌‌पाटीको‌‌ विकास भइर‌‌हे‌‌को‌‌ छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न सहमतीय आधार‌‌मा ने‌‌तृत्व चयन गर्नुपने‌र्‌ अहिले‌‌को‌‌ टड्कार‌‌ो‌‌ आवश्यकता हो‌‌ ।
टानभित्रको‌‌ र‌‌ाजनीतिक खिचातानीले‌‌ गर्दा सिंगो‌‌ व्यवसायमा नकार‌‌ात्मक असर‌‌ परि‌‌र‌‌हे‌‌को‌‌ गुनासो‌‌ आउने‌‌ गर‌‌े‌‌को‌‌ छ नि ?
र‌‌ाजनीति भन्ने‌‌ कुर‌‌ा चे‌‌तना हो‌‌ । कुनै‌‌ र‌‌ाजनीतिक दलको‌‌ सदस्यता लिनुमात्र र‌‌ाजनीति हो‌‌इन । कसै‌‌ले‌‌ आफ्नो‌‌ हक, अधिकार‌‌ बो‌‌ल्दा र‌‌ाजनीतिको‌‌ भाषा हुन जान्छ । तसर्थ स्वाभाविक रुपमा कुनै‌‌ पक्षबाट त्यो‌‌ कुर‌‌ा आउन सक्ला, तर‌‌ संस्थाको‌‌ कार्यसमितिको‌‌ हिसाबमा हामीले‌‌ र‌‌ाजनीति गने‌र्‌ प्रयास गर‌‌े‌‌का छै‌‌नौ‌‌ र‌‌ गदै‌र्‌नौ‌‌ पनि । आगामी दिनमा पनि यही हो‌‌स् भन्ने‌‌ हाम्रो‌‌ चाहना हो‌‌ । त्यस्तै‌‌ पर्यटन बो‌‌र्डको‌‌ एक किसिमको‌‌ सवाल र‌‌ह्यो‌‌, यो‌‌ चे‌‌तनाको‌‌ कार‌‌णले‌‌ भएको‌‌ हो‌‌ । यसलाई बाहिर‌‌ कति व्यक्तिहरुले‌‌ र‌‌ाजनीति भयो‌‌, टानले‌‌ र‌‌ाजनीति गर्न खो‌‌ज्यो‌‌ भन्ने‌‌ कुर‌‌ालाई उल्लि‌‌खित अर्थमै‌‌ बुझ्न म अनुर‌‌ो‌‌ध गर्दछु । हामीले‌‌ र‌‌ाजनीतिक चे‌‌तनाको‌‌ कार‌‌णले‌‌ संस्थासँग जो‌‌डिएको‌‌ विषयलाई उठाएको‌‌ हो भन्ने‌‌ कुर‌‌ालाई अन्ततः प्रमाणित ग¥यौ‌‌ ।
टान आफ्नो‌‌ कार्यक्षे‌‌त्रभन्दा बाहिर‌‌ भाषणबाजीमा के‌‌न्द्रित भयो‌‌ भन्ने‌‌हरु पनि छ नि हो‌‌इन ?
कुर‌‌ा गर‌‌े‌‌र‌‌ नै‌‌ त काम हुने‌‌ हो‌‌ । पहिला कुर‌‌ै‌‌ त गर्नुपर्‍यो‌‌ । पहिले‌‌ कुनै‌‌ पनि कुर‌‌ा व्यक्त गरि‌‌सके‌‌पछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लै‌‌जाने‌‌ हो‌‌ । भाषण गने‌र्‌ कुर‌‌ा त यहाँ कति धे‌‌र‌‌ै‌‌ संस्था छन्, टानबाट प्रतिनिधित्व गरि‌‌दिनुप¥यो‌‌ भने‌‌र‌‌ बो‌‌लाउँछन् बो‌‌ल्नु परि‌‌हाल्यो‌‌ । हामी व्यक्तिगत रुपमा गो‌‌ष्ठी/कार्यशाला गर‌‌े‌‌र‌‌ भाषण गदै‌र्‌ हिँडे‌‌का छै‌‌नौ‌‌ । अहिले‌‌ धे‌‌र‌‌ै‌‌ संघसंस्थाहरु छन्, सबै‌‌ संस्थाहरुले‌‌ टानको‌‌ मर्यादालाई बुझे‌‌र‌‌ टानलाई इज्जत दिने‌‌ हिसाबले‌‌ अतिथिको‌‌ रुपमा डाक्नुहुन्छ, त्यस्तो‌‌ फो‌‌र‌‌महरुमा समग्र पर्यटन र‌‌ समसामयिक विषयमा बो‌‌ल्नै‌‌ पर्छ । काम कति गर‌‌े‌‌को‌‌ छ भन्ने‌‌ कुर‌‌ा भो‌‌लि प्रमाणित हुन्छ । कुनै‌‌ पनि कार्यसमितिले‌‌ सो‌‌चे‌‌को‌‌ जति सबै‌‌ त काम पूर‌‌ा नहो‌‌ला । हाम्रो‌‌ कार्यकाल जम्मा दुई वर्षको‌‌ हुन्छ, त्यसमाथि हाम्रो‌‌ कार्यकाल चल्दै‌‌ गर्दा ठूला ऐ‌‌तिहासिक मो‌‌डहरुको‌‌ सामना गर्नुपर्‍यो‌‌ । हामी कार्यकालमा आइसके‌‌पछि संविधानसभाको‌‌ दोस्रो‌‌ चुनाव सम्पन्न भयो‌‌, समग्र दे‌‌श नै‌‌ चुनावका हो‌‌मियो‌‌, यसले‌‌ पनि हामीलाई प्रभाव पा¥यो‌‌ । सगर‌‌माथामा त्यति ठूलो‌‌ हिमपहिर‌‌ो‌‌ आयो‌‌, हामीले‌‌ १७/१८ जना हो‌‌नहार‌‌ आर‌‌ो‌‌हीहरुलाई गुमाउनुप¥यो‌‌ । यसले‌‌ पर्यटनमा धे‌‌र‌‌ै‌‌ ठूलो‌‌ क्षति निम्त्यायो‌‌ । पछि गएर‌‌ पर्यटन बो‌‌र्डको‌‌ विषयमा हामीले‌‌ ५९ दिन नियमित रुपमा बो‌‌र्डलाई सच्याएर‌‌ अगाडि बढाएर‌‌ लै‌‌जानुपर्छ भने‌‌र‌‌ धर्नामा बस्यौ‌‌, आवाज उठायौ‌‌, अन्ततः यसले‌‌ सत्यता प्राप्त गर्‍यो‌‌ । त्यस्तै‌‌ हुदहुदको‌‌ आँधिले‌‌ पर्यटन क्षे‌‌त्रमा ठूलो‌‌ क्षति निम्त्यायो‌‌, हामी त्यतै‌‌ लाग्यौँ । अहिले‌‌ विनाशकार‌‌ी भूकम्पले‌‌ ठूलो‌‌ क्षति निम्त्याएको‌‌ छ, हामी यतै‌‌ लागे‌‌का छौ‌‌ ।
पर्यटन बो‌‌र्डविरुद्ध एक चर‌‌णको‌‌ आन्दो‌‌लन तपाईहरुले‌‌ सम्पन्न गर्नुभयो‌‌ । पर्यटन बो‌‌र्डको‌‌ समस्या अझै‌‌ सुल्झिइसके‌‌को‌‌ छै‌‌न तर‌‌ तपाईहरु निष्कृय दे‌‌खिनुभएको‌‌ छ र‌‌ अको‌र्‌ कुर‌‌ा तपाईहरुले‌‌ सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई गो‌‌लबद्ध गर्न सक्नुभएन भन्ने‌‌ आर‌‌ो‌‌प पनि छ । के‌‌ गदै‌र्‌ हुनुहुन्छ ?
हामी निष्क्रिय भएको‌‌ हो‌‌इन । पर्यटन बो‌‌र्डको‌‌ विषय अहिले‌‌ कार्यान्वयनको‌‌ क्रममा छ, अदालतमा मुद्दा पनि चलिर‌‌हे‌‌क‌‌ो छ । प्रमुख कार्यकार‌‌ी अधिकृत नियुक्त हुनसके‌‌को‌‌ छै‌‌न, त्यो‌‌ नभएसम्म बो‌‌र्डले‌‌ गति पाउने‌‌ अवस्था र‌‌हँदै‌‌न । अहिले‌‌ नयाँ मन्त्री आउनुभएको‌‌ छ, उहाँले‌‌ अगाडि बढाउने‌‌ प्रयत्न गर्नुहुन्छ हो‌‌ला । हामीले‌‌ एक हदसम्म जनता र‌‌ व्यवसायीको‌‌ आँखा खो‌‌ल्ने‌‌ काम ग¥यौ‌‌ । हाम्रो‌‌ तर्फबाट पर्यटन बो‌‌र्डलाई समग्र पर्यटन विकासको‌‌ क्षे‌‌त्रमा अगाडि बढाउन हामीले‌‌ खे‌‌ल्ने‌‌ भूमिका हिजो‌‌ पनि खे‌‌ले‌‌का थियौ‌‌, आज पनि खे‌‌लिर‌‌हे‌‌का छौ‌‌, भो‌‌लि पनि खे‌‌ल्ने‌‌छौ‌‌ । जहाँसम्म हामीले‌‌ व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने‌‌ कुर‌‌ा छ, व्यक्ति सबै‌‌लाई एकै‌‌ ठाउँमा ल्याउन सकिँदै‌‌न । व्यक्तिको‌‌ आफ्ना विचार‌‌ र‌‌ आस्थाहरु हुन्छन् । एउटै‌‌ परि‌‌वार‌‌मा त बे‌‌मे‌‌ल हुन्छ । यत्रो‌‌ ठूलो‌‌ संस्थामा सबै‌‌ व्यवसायीहरुलाई मिलाएर‌‌ लग्ने‌‌ कुर‌‌ा संभव दे‌‌खिँदै‌‌न । तर्क वितर्क आउने‌‌ कुर‌‌ा भने‌‌को‌‌ प्राकृतिक कुर‌‌ा हो‌‌, यसलाई हे‌‌र‌‌े‌‌र‌‌ आम व्यवसायीहरुको‌‌ समर्थन भएन भन्ने‌‌ कुर‌‌ा हो‌‌इन । बहुमत के‌‌ हो‌‌ भन्ने‌‌ कुर‌‌ा महत्वपूर्ण हुन्छ । सर्वसहमति कहीँ पनि जुटाउन सकिन्न । हर‌‌े‌‌क निर्णय संस्था र‌‌ बहुमतलाई हे‌‌र‌‌े‌‌र‌‌ हुन्छ ।
टानमा आर्थिक अनियमितताको‌‌ कुर‌‌ा उठ्ने‌‌ गर‌‌े‌‌को‌‌ छ, वास्ताविकता के‌‌ हो‌‌ ?
यो‌‌ संसार‌‌मा अस्तित्व हुने‌‌को‌‌ चर्चा हुन्छ । टान एउटा गतिशील संस्था भएकाले‌‌ यसको‌‌ टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो‌‌ । हामीले‌‌ हाम्रो‌‌ बजे‌‌ट के‌‌ कति छ कहाँ कति खर्च भएको‌‌ छ, सबै‌‌ बिल भर्पाई माइनो‌‌टिङका हिसाबले‌‌ हामीले‌‌ खर्च गर‌‌े‌‌का छौ‌‌ । कर्मचार‌‌ी भएको‌‌ भए यहाँ यति खायो‌‌ भन्ने‌‌ हुन्थ्यो‌‌ । तर‌‌, हामी आफै‌‌ व्यवसायी हौ‌‌ र‌‌ आफ्नै‌‌ आम्दानीको‌‌ स्रो‌‌त भएको‌‌ कार‌‌णले‌‌ टानमा गएर‌‌ २०/५० हजार‌‌मा लो‌‌भ गर्नुपने‌र्‌ आवश्यकता छै‌‌न । त्यस्तै‌‌ कार्यसमितिमा र‌‌हनुभएका साथीहरु पनि व्यवसायमा स्थापित भएको‌‌ र‌‌ र‌‌ाम्रो‌‌ है‌‌सियत भएका व्यवसायीहरु हुनुभएकाले‌‌ अनियमितता गने‌र्‌ कुर‌‌ा र‌‌हदै‌‌न । कतिपय कुर‌‌ाहरुमा, खर्च व्यवस्थापन गने‌र्‌ सवालमा बिल भर्पाई नियमित नहुने‌‌ हाम्रो‌‌ खर्चको‌‌ वास्तविकता हो‌‌ । जस्तै‌‌ हामीले‌‌ हुम्लामा एउटा कार्यक्रम गर्‍यौ‌‌, त्यहाँ एउटा गाडी रि‌‌र्जभ गर्‍यौ‌‌ त्यसको‌‌ बिल भौ‌‌चर‌‌ हुँदै‌‌न, त्यसलाई त्यहाँको‌‌ यथार्थ खर्चमा कार्यसमितिले‌‌ अनुमो‌‌दन गर्छ । त्यहाँ सबै‌‌ ठाउँमा कहाँ टानको‌‌ बिल हुन्छ ? त्यस्तै‌‌ एक जना मजदुर‌‌लाई हामीले‌‌ कतै‌‌ भाडामा लियौ‌‌ त्यसको‌‌ खर्चको‌‌ बिल कहाँ हुन्छ ? त्यस्तो‌‌ खर्चहरु अहिले‌‌को‌‌ सन्दर्भमा ले‌‌खाले‌‌ र‌‌ाख्ने‌‌ एउटा नीतिभित्र सहज नभएकाले‌‌ समस्या दे‌‌खिएको‌‌ हो‌‌ । यसबाहे‌‌क हामीले‌‌ टानबाट भत्ता लिएको‌‌ छै‌‌न, फजुल खर्च गर‌‌े‌‌र‌‌ विदे‌‌श भ्रमणमा गएका छै‌‌नौ‌‌ । विदे‌‌श गए आफ्नै‌‌ खर्चमा गएका छौ‌‌ । हो‌‌ला प्रवद्र्धनको‌‌ हकमा टिम लिडर‌‌ भएर‌‌ जानुभएका साथीहरुको‌‌ हकमा टानले‌‌ खर्च व्यहो‌‌र्नु स्वाभाविक हो‌‌ । कतिपय कुर‌‌ाहरु साथीहरुले‌‌ बजार‌‌मा सुने‌‌को‌‌ भर‌‌मा आउने‌‌ गर्छन् । यो‌‌ हाम्रो‌‌ सामाजिक परि‌‌वे‌‌श र‌‌ चरि‌‌त्र हो‌‌ । हामी खुला किताब हौ‌‌ । यदि त्यहाँ कुनै‌‌ कमजो‌‌र‌‌ी भएको‌‌ छ भने‌‌ भूलचुकमा भएको‌‌ हो‌‌ला । तर‌‌, टान एकदमै‌‌ पार‌‌दर्शी छ ।